Soo -saarayaasha Wararka - Shirkadaha Wararka Shiinaha & Warshadda
Hambalyo ku-guulaysigii la isugu yeedhay shirka isboortiga-maaliyadda ee khaaska ah ee shirkadaha mashruuca Internet-ka ee Chengdu！
27-kii Luulyo, 2021, 2021 Chengdu Internet of Things mashruuc ganacsi gaar ah oo ku saabsan is-waafajinta maalgelinta warshadaha-maaliyadda ayaa si guul leh loogu qabtay MIND Science Park. Shirka waxaa martigaliyay Sichuan Internet ee Isbahaysiga Horumarinta Warshadaha Waxyaabaha, Sichuan Integrated Circuit iyo Information Secur ...
Hambalyo Cajiib ah oo Cajiib ah Chengdu Maide oo si guul leh u soo gabagabeeyay shirkii nus-nambarka 2021 iyo hawlaha dhisidda kooxda!
Shirkadda Chengdu Mind IoT Technology Co., Ltd. waxay qabatay kulan kooban oo nus-sano ah July 9, 2021. Intii lagu guda jiray kulanka oo dhan, hoggaamiyeyaasheenna waxay soo sheegeen xog xog badan oo xiiso leh. Waxqabadka shirkaddu wuxuu ahaa lixdii bilood ee la soo dhaafay. Waxay sidoo kale dhigtay rikoor cusub oo cajiib ah, oo calaamad u ah dhammaystir ...
Si diiran u soo dhawee wakiilka Catalonia Shanghai si uu u soo booqdo Chengdu Mind IOT TECHNOLOGY CO., LTD!
Bishii Luulyo 8, 2021, xubnaha xubnaha matalaya gobolka Catalan ee Shanghai waxay tageen Chengdu Mind IOT TECHNOLOGY CO., LTD. si aad u bilowdo kormeer hal maalin ah iyo waraysi isweydaarsi. Gobolka Catalonia wuxuu leeyahay baaxad dhan 32,108 kilomitir oo isku wareeg ah, dadkiisu waa 7.5 milyan, oo ka dhigan 16%...
Rabitaanka ciidda shirkadda & hadiyadda
Fasax kasta, shirkadeenu waxay siin doontaa faa'iidooyinka shirkadda shaqaalaha iyo qoysaskooda, waxayna u soo diri doontaa rabitaankeena ugu wanaagsan ， Waxaan rajaynaynaa in shaqaale kasta oo ka tirsan shirkadda uu yeelan doono diirimaadka guriga. Waxay ahayd aaminaadda iyo mas'uuliyadda shirkaddayadu inay qof walba u oggolaato inuu ka mid noqdo qoyskan ...
Chengdu Mind ayaa ka qayb galay Guangzhou qalabka saadka iyo bandhigga teknolojiyadda!
Intii u dhexeysay May 25-27th 2021, MIND waxay keentay sumadihii ugu dambeeyay ee RFID Logistics, Nidaamyada Maareynta Hantida ee RFID, Nidaamyada Maareynta Faylka ee Caqliga leh, Nidaamyada Maareynta Warehouse Smart, iyo Nidaamyada Maareynta Meeleynta Iskahorimaadka LET-a CeMAT ASIA. Waxaan higsaneynaa inaan dardargelinno horumarka s ...
Si diiran ugu hambalyeeya shirkadeena si rasmi ah u heshay summada U · S
Ka dib Maalinta Shaqada ee 1 -da May, waxaan haynaa war xiiso leh！ Waxaan si guul leh uga diiwaangelinnay US Patent and Trademark Office mark Astaamaha sumadda waxay ka kooban tahay MINDRFID. Midabka (yada) cas iyo madow waa/ar ...